Ukuphupha ngokulala ubusuku Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Unokuchitha ubusuku kwiindawo ezininzi, umzekelo ehotele, nabahlobo bakho okanye nosapho lwakho. Ngokwesiqhelo kukho isizathu sokuchitha ubusuku kwenye indawo ngaphandle kwekhaya lakho. Kodwa ngamanye amaxesha, ngokuzenzekelayo, uthatha isigqibo sokuhlala ubusuku, mhlawumbi kuba kusebusuku kakhulu okanye kusebusuku.
Isimboli yobusuku inokufumaneka kwinqanaba lokulala. Inokuthetha ntoni apha? Ngokunxulumene nolu phawu lwephupha, kukwabangela umdla kuhlalutyo lwephupha apho lahlala khona kunye nabani. Kuba koku unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nokutolikwa kwamaphupha.
1 Isimboli yephupha «chitha ubusuku» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «chitha ubusuku» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «chitha ubusuku» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «chitha ubusuku» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwephupha ubona kwisimboli yephupha «chitha ubusuku» enye isilumkiso xa uphupha. Kwi el mundo Abantu abavukayo bavame ukuvala amehlo abo kwiingxaki okanye kwinyani. Ubunzima bahlala bunxulumene nosapho kunye nemeko yekhaya. Ukuphupha akufuneki kunxaxhe kwezi, kuba azizukunyamalala zodwa. Kungangcono ukujongana noku kwaye ufumane isisombululo.
Ubusuku njengephupha bunokubakho Ndiziva ndilahliwe bonisa ukuphupha. Uziva uhlukane ngaphakathi nabahlobo bakho okanye usapho. Nangona kunjalo, ukuba umphuphi uchitha ubusuku nomhlobo ephupheni, ujonga ngokuqinisekileyo kwikamva lakhe kwaye uyakuqonda ukuzimisela kwakhe ukudibanisa iinxalenye ezithile zobuntu bakhe ebomini bakhe.
Ukuba uvumela umntu ukuba ahlale nawe ephupheni, uya kufumana inkonzo yobuhlobo nakwilizwe elivukayo. Ukuba undwendwe lwasebusuku lwamkelekile, iphupha elo lingalindela imisebenzi emitsha enomdla ebomini bokwenyani. Ukuba undwendwe luhleli ubusuku bonke ephupheni luziva lungathandeki, umntu kufuneka ajongane nenyani engathandekiyo kubomi bakhe bokuvuka.
Ukuba ulele kwi-ski cabin, kungacetyiswa ukuba uthobeke kwaye uthobeke kwimeko enzima.
Isimboli yephupha «chitha ubusuku» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba ujonga uphawu "ubusuku bonke" ngokwembono yengqondo, oku kubhekisa kumnqweno wokuqwalaselwa ngakumbi kwaye ngqalelo. Ngokukodwa xa iphupha lilele nomnye umntu ephupheni, le ngcaciso ingasetyenziswa. Kwihlabathi elivukayo, ulangazelela ukwamkelwa ngokufudumeleyo komnye umntu. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge ngononophelo ulala nabani ephupheni. Kungenxa yokuba lo mntu unokuba akhombe umntu wokwenene kwihlabathi elivukayo.
Ukuba uvumela omnye umntu ukuba ahlale nawe ephupheni lakho, oku kungabonisa isidingo sokukhathalela omnye umntu kwaye umkhathalele. Nangona kunjalo, lo mnqweno awusebenzi ngokupheleleyo kubomi bokuvuka. Ufuna ukwenza into entle komnye umntu, kodwa kwangaxeshanye uzithemba ngokwakho isisa kwanokunakana nokuncoma. Umphuphi kufuneka azibuze ukuba kutheni angathanda ukutsala umdla ngale ndlela.
Isimboli yephupha «chitha ubusuku» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, nabani na ohleli nomhlobo ephupheni lakhe unokufuna uncedo kunye noncedo lwabanye abantu ekukhangeleni kwabo ulwazi lokomoya Qiniseka.